कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन सेल्फ आइसोलेसन जरुरी छ-प्रसीद्धि श्रेष्ठ कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन सेल्फ आइसोलेसन जरुरी छ-प्रसीद्धि श्रेष्ठ Esimana.com || Simana Media Pvt. Ltd.
4/18/2020 गते 00 00 मा प्रकाशित 2909 पटक पढिएको
मलाई टेस्ट गर्ने समयमा लक्षणहरु देखिएको थिएन । फ्रान्सबाट घर आइसकेपछि म कडा आइसोलेसनमा थिए । तर म घर आएको चौथो दिनमा मसँगै पढ्ने एक जना साथीलाई मलाई कोभिड १९ को संक्रमण देखियो भनेपछि म परीक्षण गराउन आएकी हुँ । म पनि परीक्षण गरौं न त भनेर आउँदा लक्षणहरु पनि देखिएको थिएन । २ दिनपछि नतिजा आउँदा कोरोना पोटिजिभ देखिएको भन्ने थाहा पाएँ । र यसै गरी म नेपालको दोस्रो केस भएँ भन्ने थाहा पाएँ ।
अस्पतालमा कति दिन बस्नु भयो ?
२७ दिन भयो ।
अस्पतालमा बस्दा कस्तो अनुभव रह्यो । डाक्टर र नर्सहरुको व्यवहार कस्तो पाउनु भयो ?
पहिलो कुरा त मलाई रिपोर्ट आउने वित्तिकै यहाँका डाक्टरहरूले घरमै एम्बुलेन्स पठाउनु भएको थियो । त्यो निकै इफेक्टिभ भएको थियो । डाक्टर अनुपलगायतले नै मलाई तिमी चिन्ता नलेउ भन्नु भएको थियो, यु विल बि अलराइट भनेर भन्नु भएको थियो । त्यसपछि सबै जनाले प्रोफेशनल मात्रै होइन व्यक्तिगत रुपमा पनि मलाई हेर्नु भएको छ । जहिले पनि ठीक हुन्छौं भन्नु भएको थियो । डाक्टर सागरराज भण्डारी र डाक्टर अनुप बास्तोलाप्रति धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।
यहाँ बस्दा, उपचारको सिलसिलामा केही कमी महसुस भयो कि भएन ?
एक पटक मलाई कफ हुँदा खेरी डाक्टर अनुपलाई भने त्यसको ४/५ मै मेरो छातीको एक्सरे पनि भइसकेको थियो । त्यसैले कुनै पनि प्रकारको कमी भएको मैले पाइन् । त्यस्तो अनुभव भएन ।
संक्रमण भएपछि शरीरमा के असजिलो हुँदो रहेछ ?
म अस्पतालमा भर्ना भएको १÷२ दिनपछि मात्रै लक्षणहरु देखिन थालेको थियो । शुरुमा श्वास फेर्न अप्ठ्यारो भएको थियो । पेटमा दुखेको थियो भने खोकी पनि थियो । मुख्यरुपमा त्यही नै थियो ।
निको भएर घर जाँदै हुनुहुन्छ, सरकारले कोभिड १९ फैलिन नदिन पनि प्रयास गरिरहेको छ । सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
मुख्यकुरा त म नेपाल आउने वित्तिकै आइसोलेसनमा बसेको भएर फैलिन पाएन । तर अहिले धेरै मानिसहरु सरकारले भने अनुसार आइलेसनमा पुग्न पाउनु भएको छैन । मसँग जति सुविधा पाउनु भएको छैन होला । तर सरकारले यसका लागि धेरै काम गरेको छ । त्यसैले सरकारले उहाँहरुलाई आइसोलेसनमा राख्न प्रयास गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु ।
मानिसहरु के कुरामा सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सेल्फ आइसोलेसन महत्वपूर्ण हो भन्ने लाग्छ । म पनि आइसोलेसनमा बसेको भएर कोरोना भाइसर फैलिन पाएन । त्यसैले यो महत्वपूर्ण हो भन्न चाहन्छु ।
(उपचारपछि निको भइ घर फर्कने क्रममा नेपाल टेलिभिजनसँग गरेको कुराकानी